5 Sababood Oo Aad Uga Cabsaneyso Inaad Qof Jeclaato Ama Lagu Jeclaado | Aayaha
Home XIRIIRKA IYO GUURKA 5 Sababood Oo Aad Uga Cabsaneyso Inaad Qof Jeclaato Ama Lagu Jeclaado
Qaar badan oo naga mid ah ayaa ka baqaya inay runtii wax jeclaadaan taasoo naga dhigeysaa inaan yeelano difaacyo aan aaminsanahay inay naga ilaalin doonaan in dhaawac nasoo gaaro.
Marka maxaad runtii uga baqeysaa inaad wax jeclaato?
Hoos ka akhriso 5 sababood oo aad uga baqeyso inaad qof jeclaato.
1. Jacaylku baqdin ayuu ku galiyaa
Markasta oo aad si qoto dheer qof u jeclaato, waxaa kugu sii kordheysa cabsida ah inaad qofkaas weyso. Markii uu jacayl kugu dhaco, waxaad had iyo jeer ku fakareysaa oo cabsi kugu beeraya inaad weyso qofkaad jeclaatay taasoo mararka qaar noqon karta sababta ay dadka uga baqaan jacaylka.
Waxay iska ilaaliyaan xiriirada iyo inay si buuxda qalbiyadooda u siiyaan dad kale si ay cabsidaan uga bad baadaan.
2. Waxaad ka cabsaneysaa inaad noqoto qof nugul
Sabab kale oo dad badan ay uga baqaan inay wax jeclaadaan ayaa ah inay noqdaan kuwo nugul. Inuu jaceyl kugu dhaco ama qof aad jeclaato ayaa ah khatar weyn iyadoo dad badana ay ka baqaan khaadashada khatartaan.
Markaad qof jeclaato, waxaad arkaysaa inaad aaminayso lammaanahaaga taasina waxay ku dareensiineysaa inaad nugushay. Waxaad aamineysaa in jaceylkaaga laguugu bedeli karo dhaawac.
3. Waxaad ka baqeysaa in lamaanahaaga aanu si dhab ah kuu jeclaan
Dad badan ayaa ka baqa inuu jacayl ku dhaco sababtoo ah waxay ka baqayaan in lammaanahooda aysan ka helin jacayl ku filan.
Waxay ka baqayaan inay si aad ah u jeclaadaan balse iyagana aanan loo jeclaanin si lamida sidaas. Walwalka ah in lammaanahaagu kuu jeclaan lahaa si lamid ah sidaad u jeceshahay iyo in kale ayaa ka hor istaagi karta inuu jacayl kugu dhaco.
4. Waxaad aaminsantahay in jacayl aanu jirin
Dad badan ayaa runtii ka baqa inay wax jeclaadaan sababtoo ah waxay rumaysan yihiin in jacaylku aanu jirin. Ma rumaysna in qofna si dhab ah u jeclaan karo cidda ay yihiin.
Mararka qaar aaminaadahani ayaa keenaan inaadan wax jeclaan.
5. Waxaad ka baqeysaa in mar kale uu dhaawac kusoo gaadho
Cabsida ah in markale lagu dhaawaco ayaa ah sabab kale oo dad badan ay uga baqaan inay wax jeclaadaan. Dhaawacyadii kaasoo gaaray xiriiradii hore awgood, waxaad noqoneysaa qof ka walwala furitaanka xiriir cusub.
Waxaad ka fogaaneysaa inuu jacayl kugu dhaco maadaama aad ka baqeyso dhaawac iyo diidmo.
Maxaad naftaada u siin la’dahay fursad aad markale wax ku jeclaato?
Previous articleUgaar Ah Ragga: 4 Waxyaabood Oo Ay Tahay Inaadan Ku Dhihin Haweeney
Next article7 Ficil Oo Lamaanahaaga Tusaya Inaad Si Dhab Ah U Jeceshahay
Naemti March 20, 2021 At 5:18 pm
Qodobka ugu danbeeya ayaan dareemaa ani qalbigayga cidna kuma aamino
Naemti March 20, 2021 At 5:19 pm
Qodobka ugu danbeeya ayaan daremaa ani
Afar siyaabood oo Xaaskaaga ama gabar aad jeceshahay maalin kasta aad...
Calaamadahan Gabadha Aad Ku Aragto Kuma Jeclo, Xittaa Haddii Ay Ku...